Taageerada damaanad - Laydhka Eex MediaLight
Badeecaddu waxay kaliya ugufiican tahay dammaanad ahaan. Waxaan gadaal ka taaganahay alaabtayada oo dhan oo haddii wax qaldamaan, si sax ah ayaan u hagaajin doonnaa - oo dhaqso leh. Taasi waa balanteenii adiga.
Fadlan isticmaal foomkan si aad noola soo xiriirto oo aad noo sharaxdo nooca dhibaatada. Waxaan si dhakhso leh kuugu soo laaban doonnaa saacadaha shaqada 9 am-6pm MF iyo dhowr saacadood gudahood maalmaha fasaxa ah.
Haddii cutubkaagu aanu si sax ah u shaqeynayn fadlan hubi waxyaabaha soo socda:
1) Fadlan ka saar oo dib u geli batteriga hago. Waxay u wareegi kartaa inta lagu guda jiro rarka.
2) Fadlan isku day il awoodeed oo ka duwan, sida kombiyuutar ama dekedda TV USB 3.0. (tani waxay noo ogolaaneysaa inaan meesha ka saarno adabtarada AC)
3) Fadlan ka saar qeybta hoose ee cabirka kumbuyuutarka kumbuyuutarka iskuna day inaad isticmaasho cutubka la'aantiis. (tani waxay gacan ka geysaneysaa in la aqoonsado haddii dhibaatada uu sababay dhimaalka)
Natiijooyinkaaga ka soo baxay tijaabooyinka kor ku xusan waxay noo suurta gelin doonaan inaan ku dhufanno dhulka socda jawaabta ugu horreysa.
Inta badan oo dhan, isdeji! Waanu kuu kicinaynaa oo waannu soconaynaa.